February 2021 - Super Union
ခဈြသားသမီးတို့.. သိစဘေို့…. ဆရာဘာ့ကွောငျ့ အခွခေံလူတနျးစား ဘကျကရပျတညျသလဲ ( Dr. Nay Soe Maung )
ခဈြသားသမီးတို့.. သိစဘေို့…. ဆရာဘာ့ကွောငျ့ အခွခေံလူတနျးစား ဘကျကရပျတညျသလဲ ( Dr. Nay Soe Maung ) ဆရာဟာ ရာထူးအာဏာ ကွီးကယျြတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျး မှာ နထေိုငျ ကငျြလညျခဲ့ဖူးပမေဲ့ အာဏာပါဝါ စီးစိမျဥစ်စာ …
26/02/2021 By fella News
နိုငျငံတျောပိုငျ ရုပျသံလိုငျးတှဖွေဈတဲ့ MRTV နှငျ့ မွဝတီ ရုပျသံလိုငျးတှငျ သူရဲ့မညျသညျ့ အနုပညာ လှုပျရှားမှုကိုမှ ထုတျလှငျ့ ပွသခှငျ့ မပွုဟု သတိပေးလိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျး MRTV နှငျ့ မွဝတီ ရုပျသံလိုငျးတှငျ သူရဲ့မညျသ ညျ့ …
သမေယျ့ရကျကို စောငျ့နရေတဲ့ ကငျဆာနောကျဆုံး အဆငျ့ ခံစားရတဲ့အခြိနျမှ ခငျပှနျးဟာ ညီမအရငျးဖွဈသူ နဲ့ဖောကျပွနျကွောငျး သိခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးအဖွဈ
သမေယျ့ရကျကို စောငျ့နရေတဲ့ ကငျဆာနောကျဆုံး အဆငျ့ ခံစားရတဲ့အခြိနျမှ ခငျပှနျးဟာ ညီမအရငျးဖွဈသူ နဲ့ဖောကျပွနျကွောငျး သိခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးအဖွဈ ဘယျလူမြိုး ၊ ဘယျဘာသာဝငျတှပေဲဖွဈဖွဈ အိမျထောငျတဈခုမှာကိုယျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောနဲ့အတူ အဆိုး ၊ အကောငျ အတူတှဲပွီးဖွတျသနျးခငျြကွတာပါပဲ ။ သို့ပမေဲ့လညျး …
မနကေ့ ဆူးလမှော လူပွောမြားနတေဲ့ ၅ဝဝဝစားတှေ ပွေးလှားရငျး စာရငျးစာအုပျကွီး ပွုတျကွတဲ့ ရုပျသံဖိုငျ ” ဒီသတငျးကတော့ လူပွောမြားနတေဲ့ အတှကျပါ။ သခြောလားမသခြောလားကတော့ကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျပေးပါ။ ၅၀၀၀စားတှေ ပွေးလှားရငျး စာရငျးစာအုပျကွီး ပွုတျကွ အထဲမှ လူစာရငျး …
25.2.2021 မှ 3.3.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
25.2.2021 မှ 3.3.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းစီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများ နားမလည်ပါက ရှေ့ဆက်မတိုးလိုက်ပါနဲ့။ အလိမ်အညာခံရ၍ ဆုံးရှုံးရကိန်းများ ရှိနေမည်။ ဝန်ထမ်းဆိုတရားမဝင်ငွေကြေးနှင့်မရိုးမသား လုပ်ကိုင်ရခြင်းများ ကြောင့် …
25/02/2021 By fella News
လမ်းပေါ်ထွက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြလို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ သမီးဖြစ်သူ အတွက် ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ရဲရဲတောက် အားပေးစကား
လမ်းပေါ်ထွက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြလို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ သမီးဖြစ်သူ အတွက် ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ရဲရဲတောက် အားပေးစကား `သမီး၊ ဘ၀မှာ တစ်ခါပဲသေတာပါ။ တွေးကြောက်မနေနဲ့´ တဲ့။ခွေးတွေလိုက်ဖမ်းနေလို့ ​ပြေးခဲ့ရတဲ့ သမီးကို ဖခင်ဖြစ်သူက အားပေးတဲ့စကား။ မိဘများစွာဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို …
အဖေစစ်သား ကို ဖခင်အဖြစ်မှ စွန့်လွတ်လိုက်ပြီးနောက် အပြစ်ဖို့နေသူတွေ အတွက် မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြလာတဲ့ လားရှိူးမှ ဆရာဝန်လေး…
အဖေစစ်သားကို ဖခင်အဖြစ်မှ စွန့်လွတ်လိုက်ပြီးနောက် အပြစ်ဖို့နေသူတွေအတွက် မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြလာတဲ့ လားရှိူးမှ ဆရာဝန်လေး… ဒီလိုအခြေအနေမှာ မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေကို ရှင်းပြနေရတာမျိုး မဖြစ်ချင်ပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တော့်အမေကိုပါ ထိခိုက်စော်ကားနေကြတာ တွေ့တော့ ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင် ပြောပြမယ် ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကို …
အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၂ ငါးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ပက်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းသူရဲ့ ရဲရဲတောက် ရပ်တည်ချက် ဒီကနေ့ ၂၂၂၂၂ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဒီကနေ့ညပိုင်းက အခုလို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအားလုံးမိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာအတွက်၊ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာအရမ်းကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ မနေ့ညတုန်းကလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ညအချိန်မှာစစ်ကားတွေနဲ့မြို့တွင်းမှာလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့လှည့်လည်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကပဲအပြစ်မဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုညဖက်အချိန်တွေမှာဥပဒေမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေ၊အတင်းအဓ္ဓမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်၊အရမ်းဝမ်းနည်းမိပြီးဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့မြင်ရလို့၊နောက်ထပ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ၊အထူးသဖြင့်ဒီနေ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာလုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာတွေကအရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြည့်အဝထောက်ခံပြီး၊ပြည်သူတွေနဲ့တသားထဲရပ်တည်ပါတယ်။ …
နေပြည်တော်က ဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ကွန်လွန်သွားတဲ့ ညီမငယ်လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီငယ်လေး ဟိန်းရာဇာ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ နှသုံးသားပေါ်က ချစ်သူမျက်နှာ
နေပြည်တော်က ဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ကွန်လွန်သွားတဲ့ ညီမငယ်လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီငယ်လေး ဟိန်းရာဇာ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ နှသုံးသားပေါ်က ချစ်သူမျက်နှာ ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီလေး ဟိန်းရာဇာရေ…။ မင်း သစ္စာတရားဟာ …
24/02/2021 By fella News
အဖကေ စဈတပျထောကျခံသူ ဖွဈသညျ့အပွငျ CDM ဦးဆောငျနသေူမြား ကို ဖွိုခှငျးမညျဟုဆိုသဖွငျ့ မိဘအဖွဈမှ စှနျ့လှတျလိုကျကွောငျးကွငွောလိုကျတဲ့ သားဖွဈသူ ဆရာဝနျလေး လားရှိုးမွို့နေ ပွညျသူမြား ကြှနျတျော၏အပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့ ဦးဇျောဝမျး(အဖဖွေဈခဲ့ဖူးသူ) သိစရေနျ ကြှနျတျော ဒေါကျတာစိုငျးကောငျးထကျဇျော ၏ ဖခငျအရငျးဖွဈသူတကက …
23/02/2021 By fella News